i-high frequency brazing carbide shaft
I-Brazing carbide shaft ene-induction
Inhloso: Shaza i-carbide shaft ensimbi yensimbi
Okubalulekile: I-Carbide shaft 1/8 ″ to 1 ″ ubukhulu (osayizi abahlukahlukene) Insimbi yensimbi 3/8 ″ kuye ku-1 ¼ ”I-OD Silver solder braze
Ukushisa: okubonisa upende
Ukushisa: 1400 ° F ngamasekhondi angu-60 Frequency300 kHz
Izinsiza: I-DW-UHF-6KW-III, i-150-400 kHz isistimu esebenzayo yokushisa isistimu efakwe esiteshini sokushisa esikude esinezikhwama ezimbili ze-0.66 μF (inani le-1.32 μF)
Inqubo: I-solder yesiliva isetshenziswa lapho kuhlangana khona i-carbide shaft nensimbi yensimbi Imvume phakathi kwalezi zingxenye ezimbili icishe ibe ngu- .0005 ″. Ucezu oluncane lwe-braze ye-solder lubekwa engxenyeni bese ingxenye ifudunyezwa. Kuthatha cishe imizuzwana engama-60 ukugeleza isibopho ngokuhamba kokushisa okuhle kakhulu nokugeleza kwe-solder. Noma ingxenye ingashiswa ngokushesha, imiphumela emihle itholwa ngemizuzwana engama-60.
Imiphumela / Izinzuzo: Ukushiswa kwe-Induction kunikeza ngisho nokushisa okuqondile. Ukushisa okuqondiswe kahle okudingekayo kudingeke ukuba ubhontshisi be-solder bugeleke ngokulinganayo nxazonke ukuze kuqinisekiswe ukuhlanganyela okuhle.
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi ibhande le-carbide, I-Brazing carbide shaft, I-Brazing carbide shaft ene-induction, i-high frequency brazing carbide shaft, ukufakwa kwesibhakabhakede se-carbide, I-RF ibhadla i-carbide shaft